Inona no atao hoe B2C CRM tsara indrindra ho an'ny orinasanao madinidinika? | Martech Zone
Alatsinainy, May 4, 2020 Talata, May 5, 2020 Daniela McVicker
Ny fifandraisana amin'ny mpanjifa dia efa lasa lavitra hatramin'ny nanombohany. Ny toe-tsaina B2C (Business to Consumer) dia nivadika ho toe-tsaina UX-centric ihany koa fa tsy fanaterana ny vokatra farany. Ny fisafidianana ny rindrambaiko fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa mety ho an'ny orinasanao dia mety ho sarotra.
Raha ny fanadihadiana natao dia 87% amin'ireo orinasa no mampiasa CRM miorina amin'ny rahona.
Statistika 18 CRM ilainao ho fantatra amin'ny taona 2020 (sy ankoatr'izay)
Miaraka amin'ny fahafaha-misafidy azonao atao, mety ho mavesatra sy manahirana ny maka ny tsara. Andao hojerentsika ny ohatra miavaka sasany sy ny fomba ahafahanao misafidy fitaovana mety amin'ny filan'ny orinasa kely anananao.
Ahoana ny fisafidianana CRM
Alohan'ny handraisantsika azy dia zava-dehibe ny mametraka fepetra sasany amin'ny vato. Voalohany indrindra, tsy misy fitaovana CRM roa mitovy - samy manana ny safidiny manokana.
Ny fisafidianana ny tsara dia matetika atao amin'ny alàlan'ny fandinihan-tena avy amin'ny lafin'ny orinasa, indrindra momba izay ilainao izany. Na dia misy aza ny orinasa sasany manao laharam-pahamehana ny varotra, ny sasany kosa dia aleony manara-maso sy mamakafaka amin'ny antsipiriany kokoa. Ny CRM marina dia hisy fiatraikany tsara amin'ny paikadim-barotra momba ny votoaty, ahafahanao mahita izay karazana atiny manome fitarihana bebe kokoa. Andao hijery fanontaniana vitsivitsy izay afaka manampy anao hamantatra ny CRM lafatra ho an'ny orinasanao:
Ny haben'ny orinasanao
Hatraiza ny orinasanao?
Miasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na an-trano ve ianao?
Firy ny mpiasa ao aminao ary manitatra ianao?
Ohatrinona ny angon-drakitra karakarainao isan'andro ary manitatra ve izy io?
Ny fiasa ara-teknikan'ny orinasanao
Inona avy ireo karazana matihanina anananao amin'ny karamanao?
Manana mpandinika angona sy mpivarotra ve ianao?
Manao ahoana ny mandeha ho azy ny fanohanan'ny mpanjifanao sy ny fizotry ny varotrao?
Ny laharam-pahamehan'ny orinasanao
Inona ny laharam-pahamehanao raha ny fahafaham-pon'ny mpanjifa?
Ohatrinona ny vola ampidirinao amin'ny varotra sy dokam-barotra?
Manao ahoana ny fivezivezena ny fivezivezenao ary misy sakan-tavoahangy?
55% amin'ireo tompona orinasa mangataka ny hampiasaina amin'ny CRM ambonin'izany rehetra izany.
Tabilao CRM Mahagaga 12 Tsy tianao halaina
Raha vantany vao novalianao ireo fanontaniana rehetra ireo dia hanana sary mazava kokoa sy mazava kokoa ianao momba izay ilainao. Mora ny manisa kajy ary misafidy CRM tsy mifanaraka aminao, fa miverina miverina amin'ny iray hafa ihany avy eo. Ankehitriny rehefa manana fahatakarana mazava kokoa momba ny fisafidianana ny CRM mety isika dia andao jerena ireo ohatra niavaka indrindra.
Raha mitady fitantanana tsara sy fandaharam-potoana CRM ianao, Agile CRM dia nitafy anao. Ny fitaovana dia mirehareha amin'ny safidy automatique sy ny safidy fitantanana fifandraisana izay afaka mandrindra ny fitantanana ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny taratasy.
Natao manokana amin'ny orinasa kely ao an-tsaina izy io ary tsy manana safidy orinasa lehibe mety ho hitanao ao amin'ny CRM. Na izany aza, Agile CRM dia miaraka amin'ny fanohanana feno ho an'ny plugins sy widgets izay midika fa azonao atao ny manamboatra azy io hifanaraka amin'ny filàn'ny orinasanao.
Tsidiho ny Agile CRM
Raha mitady CRM afovoany amin'ny varotra ianao ho an'ny orinasanao, aza mitady lavitra noho ny Pipedrive. Ny serivisy dia namboarina manokana niaraka tamin'ny fivarotana varotra teo afovoany, midika izany fa feno safidin'ny varotra manokana izy io.
Ny famolavolana interface tsara sy UI drag-and-drop dia miantoka fa manana ekipa haingana sy azo antoka hiasa ny ekipanao. Pipedrive dia mamela ny fampidirana imailaka izay midika fa ny ekipan'ny varotrao dia tsy mila manao multitask amin'ny takelaka samihafa ary mifantoka fotsiny amin'ny fanaovana ny asany.
Tsidiho ny Pipedrive
Copper (Prosperworks ara-dalàna) dia CRM miaraka amina fidirana amin'ny suite Google manontolo. Midika izany fa mifanaraka amin'ny fampiharana sy ny fitaovana hita ao amin'ny Google ny serivisy, ao anatin'izany ny Drive, Sheets, ary Docs.
Ny mampisaraka an'i Copper amin'ny CRM hafa dia ny mifanentana VoIP izay tafiditra ao anaty serivisy.
Amari Mellor, solontenan'ny serivisy ho an'ny zokiolona ho an'ny Grabmyessay
Io dia ahafahan'ny mpitantana ny varotrao sy ny fanohanan'ny mpanjifa mifanerasera amin'ireo miantso sy ny antoko fahatelo nefa tsy mivoaka ilay fitaovana. Izy io dia mirakitra sy mitahiry resaka amin'ny feo ho an'ny fanadihadiana taty aoriana ary ahafahanao mitahiry sy manova ny angona manan-danja mivantana amin'ny alàlan'ny Google. Copper dia iray amin'ireo CRM feno endri-javatra bebe kokoa any ary mety tsara amin'ny ankamaroan'ny orinasa kely mitady vahaolana CRM maharitra.
Tsidiho ny Copper
Amin'ny maha CRM mora vidy indrindra eny an-tsena, miaina hatramin'ny hatrizay ny HubSpot. Ity no safidin'ny de facto ho an'ny fanombohana sy orinasa kely tsy manam-bola. Mamela ny fitantanana ny mpanjifa feno sy ny fandalinana data, ary koa ny fampidirana Gmail ao anatin'ny CRM. Ny tsara indrindra dia manitsy ny vidiny araka ny safidy ampiasainao sy ny fonosana nofidinao ny HubSpot.
Ny zavatra vitsy kokoa ampiasainao mavitrika, ny kely kokoa ianao dia handoa amin'ny faran'ny volana. HubSpot dia sehatra iray lehibe ho an'ny fanarahana data sy fitantanana ny mpanjifa nefa tsy misy safidy mandroso. Na izany aza, kely dia kely ny fatiantoka, satria ny ankamaroan'ny safidy mandroso sy manadihady mandroso dia tsy ilaina amin'ny orinasa kely sy mitombo.
Raha toa ka tsy olana ho anao ny fameperana ho an'ny mpampiasa 10, dia Zoho no CRM mety indrindra ho an'ny orinasanao. Zoho dia CRM maimaim-poana miaraka amin'ny fiasa fototra an'ny CRM mandroso indrindra. Izy io dia ahafahana mitantana, manadihady ary manohana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny UI eo am-pitantanana.
Zoho dia noforonina tao am-pon'ny mpivarotra ary manasongadina ny fahaizan'ny gamification. Midika izany fa ny ekipan'ny varotrao dia mety hamorona rivo-piainana mifaninana amin'ny fanombohana ary hiasa ho amin'ny fihatsaran'ny tsirairay. Zoho dia manolotra fahaiza-manao mandroso kokoa ary lisitra fampiakarana mpampiasa amin'ny sarany kely isam-bolana. Na izany aza, ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika sy fanombohana dia hahita fahaizan'ny be sy ny maro miasa amin'ny kinova maimaim-poana koa.
Tsidiho ny Zoho
Farany, raha zavatra tena ilainao tokoa ny fitantanana angona sy ny fanarahan-dia ny mpanjifa dia hanarona izany ho anao i Highrise. Ny serivisy dia natsangana tamin'ny tahiry angona miorina amin'ny rahona ao an-tsaina, midika izany fa ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra dia voatahiry soa aman-tsara ao amin'ny CRM.
Ny Highrise dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny fitaovana fitantanana tetikasa sy kahie manokana, fa miaraka amin'ny CRM. Midika izany fa madio sy mora azo ny interface. Azonao atao mihitsy aza ny mitantana ny lisitry ny mailakao ary mandefa hafatra amin'ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny Highrise nefa tsy miverina miasa amin'ny serivisy mandeha ho azy. Raha mitady fitantanana data sy fitaovana fanaraha-maso ho an'ny orinasanao ianao, aza mitady lavitra noho ny Highrise.
Tsidiho ny Highrise
Ny CRM dia ho an'ny mpanjifanao
Eritrereto ireo mpanjifanao sy ny fifandraisanao rehefa mifidy ny lozisialy CRM ianao. Inona ireo zava-tsarotra iainanao ankehitriny ary tianao ny hanamaivana? Ity fanontaniana tsotra ity indraindray dia mety ho ny fandraisana andraikitra rehetra ilainao hampiasa vola amin'ny vahaolana CRM.
74% n'ny mpampiasa CRM no nilaza fa manana fidirana antsipiriany bebe kokoa amin'ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa izy ireo aorian'ny fampiasam-bola amin'ny CRM.
CRM lozisialy UserView
Tsy ilaina ny mitantana ny fitantanana ny mpanjifa amin'ny tanana miaraka amin'ny vahaolana feno sy takatry ny saina be dia be any. Makà làlam-pinoana ary manandrama fitaovana vaovao hahitana raha toa ka mifanaraka amin'ny workflow misy anao io. Mety ho gaga fotsiny ianao amin'ny valiny.
Tags: mailaka crmorinasa ho an'ny mpanjifaBusiness2ConsumervarahinaCRMGmailgoogle suiteHighriseahoana nony fomba hisafidianana crm
Daniela McVicker dia mpamaham-bolongana ary mpanoratra tsy miankina izay miasa akaiky amin'ny orinasa B2B sy B2C izay manome serivisy fanoratana bilaogy, fanoratana, ary serivisy fanaovana matoatoa. Amin'izao fotoana izao dia mandray anjara amin'ny Topwritersreview. Rehefa tsy manoratra i Daniela dia tia mandehandeha izy, mamaky tantaram-pitiavana sy siansa, ary manandrana divay vaovao.
COVID-19: Ireo mpanjifa sy ny statistikan'ny fividianana #StayAtHome